इन्टरनेट अदालत! - Pahilo Drishti
२०७८ भाद्र १६, बुधबार ०८:२४ गते
‘स्कुल सम्झी न’ भनेर कसैले सम्झायो भने स्कुल याद आउँदैन, साथी याद आउँछन्।
‘चर्पी जाँदा पनि नछुट्टिने जोडीको पानी बाराबार छ अइले,’ स्कुलले गफ गर्ने नयाँ मसला पायो।
डराउँदै अगाडि पुग्नेबित्तिकै, झ्याप्प तर्साउने प्रश्न तेर्सियो, ‘जतिबेलै सँगै हुने दुई जना, के भो? केको झगडा हो यो?’
तपाईं सोच्दै नै हुनुहुन्थ्यो, देब्रे हातले दाहिने बाहुलाको टाँक तान्दै साथी गम्की, ‘येइ हो नबोल्नी। नास्ता खान पनि एक्लै एक्लै जान लागी अनि म पनि हिँडे अरूसँग। नत्र सोध्नुस्, मैले केही नराम्रो सुनाकी छैन यसलाई।’
तपाईंलाई भन्न मन थियो, ‘तेइ त साथी, नराम्रो हैन, तैंले केही नै सुनाइनस् के। म स्कुल नआको दिन नयाँ सर आउनुभा रैछ, सुनाइनस्। तेरो तारिफ पनि गर्नुभा रैछ, सुनाइनस्। अस्ति रिजल्ट आएदेखि सब सुनाउन छाडिस्। मैले डाह मान्छु जस्तो गरिस्। सँगै एउटै नोट पढ्या हैन हाम्ले? मैले देको हो मलाई चार नम्बर बढी? मैले जाँचेको हो र कापी? किन मसँग बोल्दै नबोली आँखा तरेर घर गइकी तँ? आफू फर्स्ट नभा भए मलाई नि नराम्रो लाग्दो हो। तेइ पनि म बोल्दै नबोली त मरे नि जान्नथेँ।’
बरू निहुरिएर बहाना सुनायो, ‘यसले पनि मेरो मेड्डीभरि मसी छ्याप्देकी सर। घरमा कस्तो गाली गर्नुभो।’
ऊ झटपट बोली, ‘त्यो त…अनि म जिस्केर…।’
सुनिने जवाफमा दुइटा दोष मात्रै सुनिए- ‘यो बोलिन, अनि।’
‘यसले मेड्डीमा मसी छ्यापी अनि।’
हेडसरले बस् तिनै सुनिएका दुई गोटा जवाफको भरमा उर्दी लगाउनुभयो, ‘ल झगडाको कारण था भैहाल्यो। बाँकी विद्यार्थीले भन त, को सही को गलत? अब हामी फैसला गरौं, को चैं झगडालु रैछ।’
– किन हुँदैन त अनि? हातमा चार पैसा आयो, चार मान्छेले चिने, अब के चल्थ्यो त पुरानो लोग्ने! टिकटकले भाँड्यो घर।
– हैन, हैन। केटाले केटीको प्रगति देखी नसक्या हो। केटाको त जातै त्यस्तै!
– कोइ न कोइ त पक्का गुण्डा हो। कुरा नमिलेर मात्रै छुट्टिने पनि हुन्छ? म त मान्दै मान्दिनँ। छुट्टिने मान्छे आफैंले भने पनि मान्दिनँ। मैले गरेको हल्लाले उनीहरूका बाआमालाई जस्तो सुकै लागोस्, मलाई के मतलब! मैले लगाएको आरोपले त्यो केटीले करिअर नै त्यागोस्, मलाई के मतलब! मैले कसैको करिअरको ठेक्का लेको छु र? मेरो ठेक्कामा परेको त फैसला हो। जे-जे मन लाग्छ बोल्छु!
– ठिक्क पर्‍यो! वयस्क केटाकेटी, सहमति भन्नी कुरा सब किताबमै सुहाउँछ के! लोग्नेले नै अह्राएपछि बोक्नु परेन त क्यामरा? कानुनले अपराध मान्दैन भनेर भो? मेरा लागि त अनैतिक हो नि! रक्सी खाएर कुट्ने होस् कि कुटुकुटु मन काट्ने, जोडा त जोडा हो नि। म त भन्छु, यस्ता केटाकेटी बदनाम हुनै पर्छ। तुरून्तै भिडियोमा कमेन्ट गरिहाल्छु, पढोस् न त्यो बेसोमतीले। च्यानल सबस्क्राइब पनि गर्छु। यस्तो समाजको संस्कार बचाउने भिडियो पनि ट्रेन्डिङमा नल्याए त घरमा इन्टरनेट जोडेको के काम?
– छोरी त एक नम्बर छुच्ची, बेहोरा नभकी रैछ नि!
तर छोरीले राती आकाश हेर्दै गर्ने कुरा अर्कै छन्। अस्ति आमाले कुन रिसमा ‘यो त मरे पनि हुन्थ्यो’ भन्दिनु भयो। उसलाई थाहा छ, बोलेको त रिस नै हो तर बोली आमाको थियो। आमाको बोलीले पोल्यो। जति कोशिस गर्दा पनि नचिसिने गरी पोल्यो।
गजब त के भने, यो मृत्युदण्डमा फाँसी लगाइँदैन। र पनि मान्छे मर्छ। सुस्त सुस्त मर्छ। कोही ‘कठै बिचरी’ सुन्दै। कोही ‘छ्या नकचरी’ पढ्दै। कोही ‘मेरो जिन्दगी मैलाई सम्हाल्न देऊ, तिमीहरू फैसला नसुनाऊ न’ लेख्न नसकेर। कोही हरेक दिन एकएक चक्की दोषको गोली निल्नुपरेर।
अनि जताततै, ‘बिचरा, ‘च्व! च्व! च्व!’ मात्रै सुनेको उसले जिन्दगीभर आफूलाई साँच्चै केही नभएको निरीह ठानिरह्यो भने?
तर कमेन्ट गर्ने न्यायाधीशलाई लाग्छ, ‘मेरो त बिहे नै भको छैन, अरूलाई डिभोर्सको कुराले बदनाम गरेर के भो?’
‘मेरा त कोइ दाजुभाइ नै छैनन्, अर्काको अंश मुद्दाको खिसी गरेर के भो?’
‘म कहाँ अरूजस्तो बेवकुफ छु? झुक्किन्नँ म। कहाँ आफ्नो निजी तस्वीर साझा गर्छु त्यसरी?’
प्रसिद्ध बेलायती दर्शनशास्त्री बरट्रान्ड रसेलले भनेका रहेछन्, ‘म मेरा विचारका लागि ज्यान दिन्नँ किनकी म गलत पनि हुन सक्छु।’
संकटमा १० राजनीतिक शक्ति पुरानै पार्टी सुध्रन्छन् वा नयाँ विकल्प जन्मन्छ ?